Ikike Nchekwa Pvc Roller Door China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ikike Nchekwa Pvc Roller Door - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Ikike Nchekwa Pvc Roller Door)
PVC mgbochi na-agba ọsọ na-agba ọsọ
Nkwakọ ngwaahịa: Plywood igbe ngwugwu
Inye Ike: 500 sets per month
PVC mgbochi na-agba ọsọ na-agba ọsọ Ọnụ ụzọ eletrik PVC nke Hong na- eme ka ego dị elu dịkwuo elu site n'ibelata ọnụ ọgụgụ ikuku nke nwere ike ịgbanahụ oge ọ bụla ọnụ ụzọ meghere ma mechie. N'adịghị ka ọnụ ụzọ dị iche iche nke na-esite n'okike, ụzọ a na-agbanwe agbanwe na ọnụ ụzọ ọnụ ụzọ ndị ọzọ nwere ike...
PVC ngwa ngwa ulo oru hangar door
Nnukwu Dozọ Agbanwe Agbanwero Nnukwu ọnụ ụzọ PVC na-agbanwe agbanwe (ọnụ ụzọ Hangar) bụ ụzọ kachasị mma na ụlọ ọrụ ubi, ọ na-ebelata oge ntụgharị site n'otu ụlọ gaa n'ọzọ, na-ezere njehie ọ bụla nke mmadụ nke nwere ike imebi emebi ụzọ dị elu, yana ihe a niile. Ekelere usoro ekeresimesi ANTI...
Industrylọ ọrụ nchekwa ụlọ ọrụ ngalaba ngwa ngwa
Nnukwu ulo oru nyocha ihe gbasara njem A na-eji ụlọ ọrụ mepere emepe emepe emepe emepe emepe emepe (vetikal elu elu ụzọ, ebe a na-adọba ụgbọala) n'ọtụtụ mpaghara, Anyị na-erite uru site na ọnụ ụzọ ngwa ngwa mana anyị na-ahụkarị ịdị adị ya, doorzọ ọnụ ụzọ dị elu na-arụ ọrụ dị mkpa na ndụ anyị kwa ụbọchị. Ọnụ ụzọ dị...
Automatic elu sectinal roller mechiri
Nnukwu ulo oru nyocha ihe gbasara njem Industrylọ ọrụ mmepụta ihe dị n’elu ụzọ ngalaba (Vetikal na-ebuli elu, ọnụ ụzọ ụlọ ebe a na-adọba ụgbọala) bụ ụdị ngwa ọrụ na-achọ ibili usoro mmepụta gị, na-egbu oge na-enweghị oge na-adịghị mkpa. Ọ dị ezigbo mkpa na ọtụtụ ebe dị ka nnukwu ụlọ ahịa na ụlọ ahịa ga-etinye ọnụ ụzọ...
Ebe nchekwa ngwa ngwa na-emechi ngwa ngwa maka ngwa nri
Nnukwu Nchekwa Nnukwu Nchedo Nsogbu Dị Elu Ọnụ ụzọ nchekwa nchekwa (ọnụ ụzọ ụlọ nkwakọba ihe, ọnụ ụzọ mgbazigharị) bụ nnukwu ngwá ọrụ atụnyere ọnụ ụzọ nkịtị, Gịnị kpatara ịchọrọ iji mepee ụzọ ngwa ngwa? Ọ nwere ike ịbụ ezigbo onye enyemaka maka azụmahịa gị, njikwa gị. Ngwa: * N'ime, n'èzí nke na-arịọ...
PVC dị elu na-agbago ụzọ nchekwa nchekwa
Nnukwu Nchekwa Nnukwu Nchedo Nsogbu Dị Elu Ọnụ ụzọ nchekwa nchekwa (ọnụ ụzọ ụlọ nkwakọba ihe, ọnụ ụzọ mgbazinye) na-aghọ ngwaọrụ dị mkpa na ụlọ ọrụ ugbu a. N'agbanyeghị ihe ị na-eme, kinddị ọrụ ị nyere, You na-achọkarị ọnụ ụzọ dị elu iji bulie arụmọrụ ma ọ bụ nye ndị ahịa gị ahụmịhe kachasị mma. Ngwa: * N'ime,...
Ọnụ ụzọ nchekwa nchekwa PVC ọhụụ maka ụlọ ọrụ nri
Nnukwu Nchekwa Nnukwu Nchedo Nsogbu Dị Elu Ọnụ ụzọ nchekwa nchekwa (ọnụ ụzọ ụlọ nkwakọba ihe, ọnụ ụzọ mgbazigharị) bụ azịza kachasị adaba na ọrụ ubi, ọ na-ebelata oge ntụgharị site n'otu ụlọ gaa n'ọzọ, na-ezere njehie ọ bụla nke mmadụ nke nwere ike ibutere ọnụ ụzọ dị elu, na ihe a niile. Ekelere usoro...
Automatic elu ngwa ahịa nchekwa ụlọ ọrụ ụzọ
Nnukwu Nchekwa Ngwọta Nsogbu Dị Elu Ọsọ Ọnụ ụzọ nchekwa nchekwa (ọnụ ụzọ ụlọ nkwakọba ihe, ọnụ ụzọ mgbazigharị) bụ ụdị ọnụ ụzọ akpaka anyị nwere, N'ime ndekọ ahịa anyị, Ihe nlereanya a bụ mgbe niile na ahịa kachasị elu, Mgbe ụfọdụ anyị na-akpọ ya ọnụ ụzọ ngwa ngwa, enwere ike imeghe ọnụ ụzọ karịrị 1m / s. Ngwa: *...
Ngwa ngwa ngwa nchekwa nchekwa ngwa ngwa nchekwa PVC dị elu
Nnukwu Nchekwa Ngwọta Nsogbu Dị Elu Ọsọ Ọnụ ụzọ nchekwa nchekwa (ọnụ ụzọ ụlọ nkwakọba ihe, ọnụ ụzọ mgbazinye) bụ ụdị ihe eji emepụta ihe na-achọ ibuli usoro mmepụta gị, na-egbu oge na-agaghị egbu oge. Ọ dị ezigbo mkpa na ọtụtụ ebe dị ka nnukwu ụlọ ahịa na nnukwu ụlọ ahịa ga-etinye ọnụ ụzọ ngwa ngwa, Ọ bụghị naanị maka...
Automatic High ọsọ oyi nchekwa ụzọ
Nnukwu Nchekwa Nnukwu Nchedo Nsogbu Dị Elu Bịa nweta ọnụ ụzọ ọsọ ọsọ gị maka azụmahịa gị! Ọnụ ụzọ nchekwa nchekwa (ọnụ ụzọ ụlọ nkwakọba ihe, ọnụ ụzọ ndozi) abụghị naanị adabara ndị na-emepụta ihe kamakwa ọ dabara na oge azụmaahịa ọ bụla dịka nnukwu ụlọ ahịa, ụlọ ahịa ahụike, Ọnụ ụzọ ebe ọ dị mkpa imeghe / mechie...
Ngwa ngwa eji emechi PVC ngwa ngwa
Nnukwu Nchekwa Ngwọta Nsogbu Dị Elu Ọsọ Ihe anyị kwenyere bụ, arụmọrụ bụ ndụ, Oge bụ ego. Ọnụ ụzọ nchekwa nchekwa (ọnụ ụzọ ụlọ nkwakọba ihe, ọnụ ụzọ mgbazigharị) nwere ezigbo ngwọta maka igbu oge na mbufe, ibuga, mbupu, Bịaruo anyị nso ka anyị chọta nke kachasị mma nke dabara na azụmahịa gị! Ngwa: * N'ime,...
CE kwadoro ụzọ nchekwa ngwa ngwa ebe nchekwa oyi
Nnukwu Nchekwa Ngwọta Nsogbu Dị Elu Ọsọ Ọnụ ụzọ nchekwa nchekwa (ọnụ ụzọ ụlọ nkwakọba ihe, ọnụ ụzọ mgbazigharị) bụ ụdị ọnụ ụzọ a na-eji akwa ụlọ ọrụ, alloy, igwe anaghị agba nchara, igbe njikwa na sistem servo. Ọnụ ụzọ dị elu nwere ogologo ndụ ogologo oge karịa MILLION uasge, Ọ bụ nhọrọ zuru oke maka ebe a na-adọba...
Ebe nchekwa nchekwa ohuru dị ọkụ maka nri
Nnukwu Nchekwa Ngwọta Nsogbu Dị Elu Ọsọ Azụmaahịa ọ bụla ị na-aga, ebe ọ bụla ị na-achọ ịbanye, ọnụ ụzọ nchekwa Cold (ọnụ ụzọ nkwakọba ihe, ọnụ ụzọ mgbapụ) na-anọ n'akụkụ gị mgbe niile. Ma eleghị anya, ịchọpụtaghị ịdị adị ya ma ọlị, Mana anyị ga-ekwenye idobe ụzọ ngwa ngwa nke na-emechi ụzọ na-arụ ọrụ dị mkpa na...
Ihe mkpuchi nchekwa igwe mkpuchi PVC
Nnukwu Nchekwa Nnukwu Nchedo Nsogbu Dị Elu Na ndu nke ugbua, Mmadu obula no ososo, udiri azumahia nile apughi iguzo n ’ahiri, Chegodi mgbe ichere n’ime igwe mmadu, ichere ichoo uzo, Ebe onu di ntakiri ma emeghe. Nke a na-abịa n'ọnụ ụzọ nchekwa Cold (ọnụ ụzọ nkwakọba ihe, ọnụ ụzọ ndozi) nwere ike idozi nsogbu gị...
Ọkwa dị elu nke ụzọ nchekwa nchekwa nchekwa akpị oyi
High Speed stacking Door Isi Na ndu nke ugbua, Mmadu obula no ososo, udiri azumahia nile apughi iguzo n ’ahiri, Chegodi mgbe ichere n’ime igwe mmadu, ichere ichoo uzo, Ebe onu di ntakiri ma emeghe. Nke a na-abịa n'ọnụ ụzọ nchekwa Cold (ọnụ ụzọ nkwakọba ihe, ọnụ ụzọ ndozi) nwere ike idozi nsogbu gị niile. Ngwa: *...
Customer friji PVC na-agba ngwa ngwa ngwa ngwa
High Speed stacking Door Isi Na-achọ ụfọdụ ọnụ ụzọ nchekwa Cold (ọnụ ụzọ nkwakọba ihe, ọnụ ụzọ mgbapụ) ụlọ ọrụ gị, ahịhịa, nnukwu ụlọ ahịa ...? Ihe mkpuchi mkpọchi mkpọchi igwe anyị bụ nhọrọ zuru oke maka gị. Ngwa: * N'ime, n'èzí nke na-arịọ na-eguzogide ọgwụ ikuku...
Curtainlọ ndozi akwa ngwa ngwa nju oyi n'ọnụ ụzọ nchekwa
High Speed stacking Door Isi Dị ka usoro iji meziwanye arụmọrụ nrụpụta, ọnụ ụzọ nchekwa Cold (ọnụ ụzọ nkwakọba ihe, ọnụ ụzọ mgbapụ) na-arụ ọrụ dị mkpa na ndụ ọrụ kwa ụbọchị.Tainless steel Fast Rapid door na-enweta ọtụtụ uru dị ka, imeghe / apụ karịa 1m / s, Ogologo ndụ were ihe karịrị ugboro 1 Million. HongFa bụ onye...
PVC akwa ngwa ngwa ngwa nchekwa nchekwa ụzọ
High Speed stacking Door Isi Ọnụ ụzọ nchekwa nchekwa (ọnụ ụzọ ụlọ nkwakọba ihe, ọnụ ụzọ mgbazigharị) bụ ezigbo ndị enyemaka maka azụmahịa gị, needchọrọ mmụba nke ijeụkwụ gị mgbe ị na-ebuga, na-ebugharị, na-ekwurịta okwu? Doorzọ ngwa ngwa dị otú a nwere ike igbocha gị. Ngwa: * N'ime, n'èzí nke na-arịọ...
Storagezọ nchekwa ngwa ngwa ngwa ngwa maka ịchekwa nri
High Speed stacking Door Isi Ọnụ ụzọ nchekwa nchekwa (ọnụ ụzọ ụlọ nkwakọba ihe, ọnụ ụzọ mgbazigharị) bụ ụdị ọnụ ụzọ a na-eji ruo ọtụtụ iri afọ na ụlọ ọrụ, nkwakọ ngwaahịa, elektrọnik n'ahịa ụwa. Storagechekwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa mana enwere nnukwu uru na mmepụta, mbugharị, na-ebuga ya, Ọ...
Nchekwa igwe mkpuchi PVC chiri ọnụ ụzọ ngwa ngwa
High Speed stacking Door Isi Kedu ihe kpatara ịchọrọ ọnụ ụzọ nchekwa PVC Cold dị ọsọ (ọnụ ụzọ nkwakọba ihe, ọnụ ụzọ mgbazinye) maka azụmahịa gị? Ọnụ ụzọ nchekwa nchekwa (ọnụ ụzọ ụlọ nkwakọba ihe, ọnụ ụzọ mgbazigharị) nwere ike imeghe / mechie ihe karịrị 1m / s ma nwee nnukwu ọrụ iji guzogide ike, n'agbanyeghị ebe...
Ụlọ Ọrụ PVC Fabric Rapid Roller Industrial Automatic
Ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ ụlọ ọrụ na-emepụta ihe na-emepụta ihe
Oghere Nkeji Akara Elu Ụlọ Elu Garage
Egwuregwu Electronic 24GHz Automatic High Speed ​​Door Radar Detector
Ikike Nchekwa Pvc Roller Door Pvc Roller Door Mee ka PVC Roller Up Door Energy Ichekwa Pvc Roller Gate Ọnụahịa Pvc Roller Door Anti Static Pvc Roller Door Price Nchekwa onwe Zepper Door PVC Roller Door